बिना कलेजो मानिस बाँच्न सक्दैन। त्यो शरीर को सबै प्रक्रियाहरू संलग्न छ, यो toxins को रगत शुद्ध पार्छ। जिगर पनि जो मार्फत हानिकारक पदार्थ को प्रत्येक दोस्रो ठूलो रकम बित्दै फिल्टर भनिन्छ। र कुनै पनि फिल्टर जस्तै, कलेजो ढिलो होस् वा पछि "clogging", र उनको असफल ध्यान को अभाव मा। तपाईं कलेजो संग एक समस्या छ कि पत्ता लगाउन समय रूपमा? लक्षण, संकेत - तिनीहरूलाई केही यसलाई चिकित्सा सहायता खोज्न आवश्यक छ भनेर भन्न? का, स्वास्थ्य र उपस्थिति मा परिवर्तन के प्रायजसो कलेजो समस्या संकेत मा पत्ता गरौं।
शरीर सिस्टम मा कलेजो को भूमिका
तर पहिलो, हामीलाई कलेजो को "कर्तव्य" को भाग सम्झना गरौं। त्यो प्रोटिन, बोसो, कार्बोहाइड्रेट प्रक्रियाहरू संलग्न छ। जिगर सफा र पछि हाम्रो धमनिहरु मा सफा भाग्यो भनेर रगत, आफ्नो कक्षहरू मार्फत फिल्टर। जिगर toxins toxins, भारी धातु र मार्फत शरीर प्रवेश कि carcinogens को चोट प्राप्त श्वसन र खाना। तर एक दिन, कारण आक्रामक पदार्थ को एक विशाल नम्बरको फारम मा अत्यधिक लोड गर्न, कलेजो आफ्नो मुख्य कार्य सामना गर्न ceases। फलस्वरूप, त्यहाँ धेरै चयापचय प्रक्रियाहरू मा असफलता हो, र हाम्रो नसाहरु मा अशुद्धताओं toxins संग रगत खराब साफ चलाउन थाल्छ। निस्सन्देह, स्वास्थ्य छैन सबै भन्दा राम्रो तरिका प्रभावित छ।
जिगर समस्या। लक्षण, फिक्री लक्षण
बाह्य आफूलाई प्रकट धेरै भिन्न लक्षण, साथै रोगी स्वास्थ्य मा प्रभाव। यो कि कलेजो नै चोट छैन उल्लेख गर्नुपर्छ, तर आफैले अन्य अङ्गहरू मार्फत महसुस बनाउँछ। त्यसैले, कसरी कलेजो समस्या पहिचान गर्न?
यहाँ प्रायजसो मा जो सुविधाहरू, एक सूची छ कलेजो रोग को लक्षण :
Yellowish छाला टोन र आँखा कर्निया। छाला को लागि, यो Palms को विशेष गरी पहेंलो सजग गराएका गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, यो अक्सर त्यहाँ कलेजो समस्या छ भने छ। लक्षण निम्न तरिका मा घर मा जाँच गर्न सकिँदैन। 3-4 दिन भित्र, तपाईं ताजा हावा मा थप बारम्बार हो, मिठाई, फैटी देखि इन्कार आफ्नो कम्प्युटर र TV मा थप पानी, कम सिट पिउन, एक स्वस्थ आहार पालना गर्न आवश्यक छ। यो समय पछि समय पाम नै फारम हुनेछ भने, त्यसपछि तपाईं एक डाक्टर हेर्न एक नियुक्ति गर्न आवश्यक छ।
असामान्य सही माथिल्लो वृत्त को चतुर्थ दुखाइ। यो कलेजो वृद्धि दिन्छ। साथै, यो दबाब डायफ्राम मा श्वास बनाउने, कठिन बारम्बार बन राख्न सक्नुहुन्छ।
बारम्बार urination, एक परिणाम रूपमा, तिर्खा र सुक्खा मुख को एक बिरामी अर्थमा ग्रस्त छ।
ईर्ष्या, घृणा, मुख, कब्जियत, उल्टी, belching मा तीतो स्वाद। अनियमित आंत्र आन्दोलनहरु को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध भोक हानि देखि मोटोपना वा वजन विकास हुन सक्छ।
को नङ मा सेतो स्थलहरू। जिगर क्याल्सियम को अवशोषण को प्रक्रिया मा समावेश छ, र यी मा व्यक्त गरिएको छ जो उनको रोग, यस भइरहेको छैन को नङ मा सेतो स्थलहरू।
सामान्य फ्रेंच। चक्कर आना, दाह, lethargy, गतिविधि, अनिद्रा, भोक कम, वाकवाकी - यो पनि त्यहाँ कलेजो समस्या छ भनेर संकेत गर्छ हुन सक्छ।
जिगर को इनकार अन्ततः हाम्रो शरीर को सबै अंगहरु को कार्य प्रभावित हुनेछ किनभने लक्षण, फरक हुन सक्छ। त्यसैले, जब तिनीहरूले एक डाक्टरसँग परामर्श लिनु आवश्यक हुन देखिन्छन्। कलेजो समस्या को संकेत बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
कान पछि Inflamed लसीका नोड्स? मुख्य कुरा - संक्रमण हटाउन!
घनिष्ठ स्थानमा जोश
Shurpa कसरी खाना पकाउनु? पोर्क Shurpa कसरी खाना पकाउनु: व्यञ्जनहरु, फोटो
तालिका दक्षता प्रकार। Pokemon र युद्धमा आफ्नो सेना
बाल सदन मा एक गर्मी छुट्टी कसरी व्यवस्थित गर्न
प्रत्येक प्रयोगकर्ताको विश्व नेटवर्क गएर ढिलो होस् वा चाँडो प्रश्न - कसरी स्क्रिन देखि ब्यानर हटाउन
एक वर्ष पुरानो बच्चा र बच्चाहरु को लागि अन्य भोजन लागि स्वादिष्ट omelette